Khamri lagu qabtay degmo katirsan Gobalka Banaadir – Bandhiga
Xaafad katirsan degmada Kaaraan ee Gobalka Banaadir ayaa lagu qabtay maanta dhalooyin farabadan oo maandooriye ah kadib howlgal ay sameeyaan ciidamada amaanka.
Afhayeenka Ciidanka Booliska dowladda Dhame Sadiiq Adan Cali (Duudishe) oo warbaahinta kula hadlay gudaha Saldhiga Kaaraan ayaa waxaa uu sheegay in Ciidanka ay gacanta ku dhigeen gaari nooca xamuulka qaado ah ee loo yaqaano TII AM-ka oo lagu dhex-qariyey qamri badan, kaasi oo ka yimid Gobollada Dhexe ee dalka.
Afhayeenka ayaa sheegay dadkii watay qamriga in ay baxsadeen, hayeeshee Ciidanka amniga ay ku raad-joogaan, isla markaana gacanta lagu soo dhigi doono.
Dhame Sadiiq Duudishe ayaa tilmaamay in shaqsigii u rarnaa gaariga lagu dhex-qariyay maandooriyaha uusan waxba kala socon, taasina ay ku ogaadeen, kadib markii ay sameeyeen baaritaano kala duwan, iyadoona qamriga la burburiyay.
Afhayeenka Ciidanka Booliska ayaa waxaa uu Carabka ku dhuftay in qamriga iyo maandooriyeyaasha kale ay ka qeyb qaatan amni darrada dalka, isla markaana aan la ogolaal doonin in maandooriye lasoo geliyo dalka.